China Nyoro PVC Wristbands & Zvamaoko fekitari uye vagadziri | SJJ
Soft PVC Wristbands akakwana kune vakuru kana vana mune ese marudzi ezviitiko. Iwo eSoft PVC mabhandi echando anoitwa neyakareruka PVC zvinhu zvine die yekukanda mafuru. Izvo zvinhu zvakapfava, zvinoshanduka, zvinogara, uye zvakatipoteredza. Saizi yakajairika ndeye 220 mm yevakuru kana 190 mm yevana, nepo yakagadziriswa saizi iri ...
Soft PVC Wristbands akakwana kune vakuru kana vana mune ese marudzi ezviitiko. Iwo eSoft PVC mabhandi echando anoitwa neyakareruka PVC zvinhu zvine die yekukanda mafuru. Izvo zvinhu zvakapfava, zvinoshanduka, zvinogara, uye zvakatipoteredza. Saizi yakajairwa ndeye 220 mm yevakuru kana 190 mm yevana, nepo zvakagadziriswa saizi zviripo nekuburitsa mafomu matsva mumutengo mudiki. Mhando dzese dzeSoft PVC Wristbands masitayera senge machira, mawoko, zvisungo zvisungo, mbama mawrists, mawachi uye mamwe mabasa ane akasiyana kushongedza anozivikanwa pasirese. Yakasarudzika marogo akavezwa, akadhirowewa, akazara ruvara, akadhindwa kana laser rakanyorwa. 2D uye 3D mhedzisiro ine mavara zvikamu zvakanaka kuratidza mamakisi emalogo ako, uye ita kuti zvigadzirwa zvako zvinyatso kuve zvipenyu uye zvakajeka. Kwete MOQ ishoma, ipfupi yekugadzira nguva, mhando yepamusoro chengetedzo uye basa rakanaka ndiwo mukana wedu kukubatsira iwe zvakanyanya. Yedu Yakapfava PVC Wristbands uye zvishongo zvine ako akasarudzika marogo uye akasiyana mavara kusanganiswa achasangana nezvako zvido kune vanhu vakuru kana vana machira mabhandi uye zvishongo misika inowedzera.
Kupedzisa: Logos inogona kudhindwa, yakadhirowewa, yakarongedzwa isina mavara, yakarongedzwa neruvara ruzere, laser rakanyorwa uye saka kwete
Zvakajairika Zvakasungirirwa Sarudzo: HAPANA chinongedzo pakutsigirwa kana zvidimbu zvesimbi zvekurova mabhendi
MOQ: Hapana MOQ inogumira, yakawanda huwandu, mutengo uri nani
Pashure: Yakapfava PVC Photo Frames
Zvadaro: Yakapfava PVC Cable Winders